ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သို့မဟုတ်တက်မစတင်ပါဘူးဆိုရင်ဘယ်အရာကို - ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပွနျလညျထူထောငျ - 2019
ဒီ site တွင်ပြုလုပ်ထားပြီးဝေးကွန်ပျူတာသမျှအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖွင့်မည်မဟုတ်ဘယ်မှာဖြစ်ပွားမှုအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖော်ပြတဦးတည်းဆောင်းပါးကနေဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ရှိသမျှတို့ကိုငါရေးထားလျက်ရှိ၏စည်းရုံးနှင့်သင်ကူညီပေးရန်အရှိဆုံးဖွယ်ရှိ၏ထားတဲ့အတွက်ဗားရှင်းဖြစ်ပွားမှုကိုဖော်ပြရန်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာကဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသေချာအချို့ကိုဒီဂရီနှင့်အတူဖြစ်နိုင်အောက်တွင်ပြောသည်ပါလိမ့်မည်သည့်မိမိတို့၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, အသုံးပြုပုံစည်းကမ်းအဖြစ်ဖွင့်သို့မဟုတ်စတင်မပြုစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲအမှားအစိတ်အပိုင်း - အသုံးအများဆုံးပြဿနာများမှာအနည်းဆုံး software ကိုမအောင်မြင်မှုများသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးဖိုင်များ, hard disk ပေါ်မှာမှတ်တမ်းများကဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိသည်။
သင့်ရဲ့ဒေတာအရပျ၌တည်နေကြလိမ့်မည်နှင့် PC ကိုသို့မဟုတ် Laptop ကိုတစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်ပြည်နယ်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့မျှမျှတတလွယ်ကူသည်: မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဘာပဲဖွစျပကျြ, အလုံးစုံမှန်ဖို့များပါတယ် "ဘာမျှမအလုပ်လုပ်တယ်" လျှင်ပင်သတိရပါ။
prima နိုင်ရန်အတွက်ဘုံ options များထည့်သွင်းစဉ်းစား။
အဆိုပါ Monitor ပေါ်မှာကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်ဆူညံသံစေသည်, ဒါပေမယ့်တကအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ပြ boot မထားဘူးမနေပါနဲ့
ကွန်ပျူတာပြုပြင်ဘို့လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာအောက်ပါအတိုင်းအလွန်ကိုမကြာခဏ, အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ပြဿနာသူတို့ကိုယ်သူတို့ရှာဖွေရေးမှာ: အဆိုပါကွန်ပျူတာပေါ်မှာလှည့်ပေမယ့်မော်နီတာလုပ်ကိုင်ရန်မထားဘူး။ ဒီနေရာတွင်ကအများဆုံးကိစ္စများတွင်သူတို့မှားကြောင်းမှတ်ချက်ပြုရပါမည်နှင့်အကြောင်းပြချက်ကွန်ပျူတာထဲတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်: ကဆူညံသံများနှင့်အလင်းအိမ်ပေါ်မှာစေသည်ဟူသောအချက်ကိုကအလုပ်လုပ်တယ်မဆိုလိုပါ။ ဆောင်းပါးထဲမှာဒီအပေါ်ကိုပိုမို:
အဆိုပါကွန်ပျူတာအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ဖေါ်ပြခြင်း, သာဆူညံသံ boot မထားဘူး
အဆိုပါ Monitor ပေါ်မှာကိုဖွင့်မထားဘူး
ဒီအပြုအမူများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကွဲပြားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်သူတို့တစ်တွေပျက်ယွင်းနေပါဝါအဒက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအပူနှင့်ဆက်နွှယ်နေသော။ Windows အဖွင့်ချိန်မှာရှေ့တော်၌ထို PC ကိုပိတ်ခြင်းပြီးနောက်အများဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိက power supply အတွက်ဖြစ်ပြီး, ဖြစ်ကောင်းကအစားထိုးခံရရန်လိုအပ်ပါသည်။
အလိုအလျောက်ကွန်ပျူတာ shutdown ချသူ့အလုပ်အပြီးမကြာမီဖြစ်ပေါ်လျှင်, overheat ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်မြေမှုန့်ထဲကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်အပူအမဲဆီအစားထိုးဖွယ်ရှိအလုံအလောက်ရှိပါတယ်:
အဆိုပါ CPU ကိုပေါ်အပူငါးပိလျှောက်ထားရန်ကဘယ်လို
သင့်ကွန်ပျူတာဖွင့်ပေမယ့်အစားကို Windows Boot ကို၏ error message ကိုတွေ့မြင်? , BIOS င်ပြီး boot order, သို့မဟုတ်အလားတူအရာနှင့်မဆိုသည့်စနစ်ဖိုင်တွေနဲ့အတူပြဿနာအများစုမှာဖွယ်ရှိ။ fix ဖို့များသောအားဖြင့်တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်။ ဤတွင်ဒီလိုမျိုး (link ကို - ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုများ၏ဖော်ပြချက်) ၏အသုံးအများဆုံးပြဿနာများ၏စာရင်းကိုဖြစ်ပါသည်:
အမှားပြင်ရန်အတွက်မည်သို့ - BOOTMGR ပျောက်ဆုံးနေ
non စနစ်က disk ကိုသို့မဟုတ် disk ကိုအမှားပါ (အမှားနှင့် ပတ်သက်. ကျနော်လုပ်ဖို့ကြိုးစားရန်ပထမဦးဆုံးအရာရေးသားခဲ့သည်သည်အထိ - ။ အားလုံးချောင်းကို Disable အပေါင်းတို့နှင့်အတူ drives တွေကိုဆွဲထုတ်,, BIOS ထဲမှာ်ပြီး boot order ကိုစစ်ဆေးပြီးပြန်ပေါ်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစား) ။
startup မှာကွန်ပျူတာ Beep
အဆိုပါလက်တော့သို့မဟုတ် PC ပုံမှန်အားပိတ်ထားအစား beeping စတင်သည်ဆိုလျှင်, ထို့နောက်ညှစ်သံမြည်များ၏အကြောင်းရင်းရှာဖွေဤဆောင်းပါးကိုလှည့်နိုင်ပါသည်။
သင် ON / OFF button ကိုနှိပ်ကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ဘာမျှဖြစ်ပျက်ပြီးနောက် အကယ်. : ပရိသတ်တွေ, အယ်လ်အီးဒီတက် lit နေကြတယ်, သငျသညျအောကျပါအမှုအရာတို့ကိုစစျဆေးဖို့လိုအပ်ပါပထမဦးဆုံးအရာရရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်:
အဓိကပေးဝေရေးမှ connection ။
နောက်ဘက်အပေါ်အဓိက filter ကိုနှင့် switch ကို (desktop ကို) ကွန်ပျူတာ power supply ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါငျးတို့သလျှင်, system ကို power supply ယူနစ်စစ်ဆေးပါ။ တစ်ဦးစံပြအတွက် - အခြားချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားရန်, အလုပ်အာမခံချက်, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်ဆောင်းပါးတစ်ခုခေါင်းစဉ်ရဲ့နေကြသည်။ သငျသညျကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီမှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးမခံစားရဘူးလျှင်, ငါသည်သခင်ကိုပဌနာရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မယ်။
Windows7ကိုမစတင်ထားဘူး
နောက်ထပ်လည်းအသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည့်ဆောင်းပါး, နှင့်အရာက Windows7operating system ကိုမစတင်ထားဘူးသည့်အခါထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုပေါ်အမျိုးမျိုးသော options များစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ငါတစ်စုံတစ်ဦးကိုစာရင်းပြုစုထားသည့်ပစ္စည်းများကူညီပေးနိုင်ပါသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ နမူနာခေါင်းစဉ်ကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သောသဘောပေါက်ခဲ့သည်သည်အထိငါက, အလှည့်အတွက်, ငါသည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေါ်တွင်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်အဘယ်အရာကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယျအရာနှင့်အနီးအနာဂတျမှာချေးငွေဖြစ်ပါတယ်။
https://termotools.com my.termotools.com © ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပွနျလညျထူထောငျ 2019